उत्साहप्रद शेयरबजार | गृहपृष्ठ
Home लगानी उत्साहप्रद शेयरबजार
on: २० भाद्र २०७५, बुधबार १०:५५ लगानी
गत हप्ता विभिन्न लगानीकर्ताको समूहले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग भेट गर्‍यो । अर्थमन्त्री डा. खतिवडासँगको आशावादी भलाकुसारीले शेयरबजारको अन्तिम दिन लगानीकर्ताको आत्मबल बढाएको देखिन्छ । हप्ताको अन्तिम दिन नेप्से विन्दुगत आधारमा ११८१ दशमलव ६९ मा रहेको थियो ।
बङ्गालको खाडीका मुलुकहरूको सम्मेलन (बिमस्टेक)ले गत हप्ता १८ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्‍यो । यस सम्मेलनले यस क्षेत्रको आर्थिक विकासका लागि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कुनै ठोस योजना तथा प्रगतिको सम्भावना नदेखाएकाले शेयरबजारमा त्यसको खासै असर परेन । यद्यपि, कनेक्टीभीटी र पर्यटन कन्क्लेभजस्ता लोभलाग्दा शब्द तथा योजना कार्यान्वयन भए आशावादी हुने ठाउँ अवश्य रहेको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष (आव) २०७५।७६ को दोस्रो महीना भदौको दोस्रो हप्ता बैङ्कहरूको ब्याजदरमा परिवर्तन हुने छाँट देखिएको छ । कतिपय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर घटाई लगानी गर्न आक्रामक देखिएका छन् । यसले शेयरबजारमा लगानीकर्ताको मनोबल उच्च राख्ने देखिएको छ । साथै कतिपय कर्पाेरेट संस्थाको वार्षिक साधारणसभाले समेत शेयरबजारको मनोबल आगामी केही साता उच्च राख्ने आशा गरिएको छ ।
पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनामा चीनको थ्री गर्जेज कम्पनीले लगानी नगर्ने घोषणा गरेको छ । यसले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा विदेशी लगानी जुटाउने सरकारी योजनामा चुनौती थपेको छ । तथापि शेयरबजार तथा हाइड्रो इण्डेक्समा गत साता यस समाचारले खासै असर गरेको देखिएन ।
नेपालको शेयरबजार : जोखीमको अवस्था र उपाय
झण्डै ३ दशकदेखिको नेपालको एक मात्र शेयरबजार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा बजारको पूँजीकरण चुक्ता मूल्यको आधारमा ३ खर्ब ४६ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जुन बजार मूल्यका आधारमा अझ ठूलो हुन्छ ।
यो बजारमा साधारण शेयर (कमन स्टक) तथा सरकारी ऋणपत्र (ट्रेजरी बिल्स)को कारोबार हुने गरेको छ । बजारको संस्थागत संरचनाका आधारमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले बजारको सञ्चालन गरेको छ । यसका ५० ओटा दलाल कम्पनी सदस्य छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्ड नियामक निकायका रूपमा रहेको छ भने बजारको पेरिफेरल प्रणालीका रूपमा विकास गर्न मर्चेण्ट बैङ्कर तथा म्युचुअल फण्ड कम्पनीसमेत रहेका छन् ।
विन्दुगत आधारमा स्टक एक्सचेञ्जको इण्डेक्स १८६३ सम्म पुगेको थियो । बजारमा मूल्यको उतारचढाव हुनु एउटा हुनैपर्ने गुण हो । तर, बजारमा हुने ठूलो उचारचढावले बजार एक्कासि ओरालो लाग्दा बजारमा सर्वसाधारण लगानीकर्ता सबभन्दा बढी आहत हुने गर्छन् । तर, बजार लामो समयसम्म बियरिस भइरहँदा नेपालमा संस्थागत लगानीकर्ता जस्तै मर्चेण्ट बैङ्कर तथा म्युचुअल फण्ड कम्पनीहरू समेत आहत हुने गरेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा बजारमा ठूलै जोखीम उत्पन्न हुने गर्छ । यस्ता जोखीम (प्लाउजिबल रिस्क) सर्वसाधारण लगानीकर्ता, संस्थागत लगानीकर्ताका लागि मात्र नभई कहिले काँही समग्र अर्थतन्त्रलाई समेत नकारात्मक असर गर्न सक्ने खालका हुन्छन् । यस्ता जोखीम न्यूनीकरण गर्न विकसित तथा परिपक्क बजारमा विभिन्न तरीका अपनाइएका हुन्छन् ।
नेपालको शेयरबजारसमेत पूँजीगत आधारमा निकै ठूलो भइसकेको अवस्था कसैबाट लुकेको छैन् । यदाकदा बजारमा आन्तरिक तथा बाह्य कारणले पहिरो जाँदा बजार दुख्ने (मार्केट प्यानिक) गर्छ । त्यसै कारणले नेपालको बजारमा फाइनान्सियल डेरिभेटिभ्सको टड्कारो आवश्यकता भइसकेको छ ।
म्युचुअल फण्ड कम्पनीको न्यूनतम चुक्तापूँजी १०० करोड तोकिएको छ । यसमा ती कम्पनीहरूले विभिन्न अस्त्र बनाई शेयरबजारमा लगानी गर्ने गरेका छन् । तर, बजारले लामो समयसम्म आशा नदेखाउँदा अथवा आवश्यक नाफा उत्पादन गर्न नगरिदिँदा यस्ता कम्पनीहरू घाटा बेहोर्न बाध्य हुन्छन् । यस्ता कम्पनीहरू नोक्सानीमा जाँदा शेयरबजारमा पूँजीगत तरलता घट्न जान्छ जसले शेयरबजारमा झन् ठूलो पहिरो जाने डर हुन्छ ।
शेयरबजारमा यस्ता कम्पनीहरूको कारण पहिरो गएका बैङ्कहरूमा समेत पूँजीको तरलता घट्ने हुन्छ र त्यसको नकारात्मक असर बैङ्कको ब्याजदर प्रणालीमा समेत पर्ने हुन्छ । बैङ्कको ब्याजदर प्रभावित हुँदा अर्थतन्त्रको समग्र अंश नै प्रभावित बन्न पुग्छ ।
तसर्थ नेपालको पूँजीबजारसँग सरोकार राख्ने पक्ष, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क तथा अन्य निकायको समन्वयमा स्टक मार्केटमा डेरिभेटिभ्स अस्त्रको कारोबार गराउन अति आवश्यक छ । यसले ठूला लगानीकर्ता तथा संस्थागत लगानीकर्ताको जोखीम व्यवस्थापन गर्न पनि मदत नै गर्छ । र, पूँजीबजारको वित्तीय तरलता (फाइनान्सियल पुल)लाई अझ बलियो बनाउनेछ ।
यस्ता अस्त्रले सट्टेबजारी (स्पेकुलेशन)लाई प्रश्रय दिन्छ भन्ने तर्क पनि यदाकदा सुन्ने गरिएको छ । तथापि सरोकारवाला निकायले लेभरेजिङ्ग तथा हेयर कटिङ गर्दै सट्टेबजारीलाई निरुत्साहित गर्दै यस्ता अस्त्रलाई बजारमा ल्याउनुको विकल्प छैन ।
अब पनि यस्तो गर्न सकिएन भने भविष्यमा अर्थतन्त्रमा पर्ने सानो नकारात्मक प्रभावले पनि पूँजीबजारमा ठूलो पहिरो जाने जोखीम रहन्छ । र, सो पहिरोले अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्नै नसक्ने गरी जोखीममा धकेलिदिन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।